HomeKnowledgeပငျလယျကိုကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ ရရှိလာမယျ့ အံ့ဩစရာ အကြိုးကြေးဇူး (၅) ခု
အလုပျတှေ ပငျပနျးလာတဲ့အခါ " ကမျးခွေ တဈခုခုကို သှားခငျြလိုကျတာလို့ " သငျကိုယျတိုငျ ပွောမိကောငျးပွောမိ ပါလိမျ့မယျ။ သူမြားတှေ ပွောတာလညျး ကွားဖူး ပါလိမျ့မယျ။ ပငျလယျကို ကွညျ့ခွငျးက စိတျအပနျးပွစေရေုံ သာမက ခန်ဓာကိုယျ ကိုလညျး ပငျပနျး သကျသာစေ တယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ။
1. ပငျလယျက လူတှအေတှကျ သဘာဝ ဆေးနညျးကောငျး တဈခုဖွဈခဲ့တာ နှဈပေါငျး မနညျးတော့ပါဘူး။
ပငျလယျက လူသားတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအပျေါ အကြိုးပွုကွောငျး သိမွငျလာခဲ့တာ ဆယျစုနှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာပါပွီ။ 18 ရာစုမှာ William Buchan တို့လို ဆရာဝနျတှကေ ပငျလယျမှာ ရခြေိုးဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့ကွပါတယျ။ ပငျလယျရကေ ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးရှိကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။ အထူးရတေပျ ဆေးရုံတှေ မှာလညျး ပငျလယျရကေုထုံးကို အသုံးပွုကွပါတယျ။ ပငျလယျရကေ လူသားတှအေတှကျ အကြိုးပွုကွောငျး ယခုခတျေမှာလညျး ရှာဖှတှေရှေိ့လာ ကွပါပွီ။
2. ပငျလယျက ခန်ဓာကိုယျကို အောကျဆီဂငျြ ဖွညျ့ပေးပွီး စိတျပငျပနျးမှုကို လြော့စပေါတယျ။
ပငျလယျရသေံက ဦးနှောကျအရှပေို့ငျးကို လနျးဆနျးစေ ပါတယျ။ ပငျလယျကို ရောကျတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျက ထှကျတဲ့ အမဓာတျ အိုငျယှနျတှကေို ပငျလယျလှိုငျးတှကေ စုပျယူသှားတယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ပွောကွပါတယျ။ အဲဒီလို စုပျယူသှားခွငျးက ခန်ဓာကိုယျကို အောကျဆီဂငျြ မြားမြား ရစပွေီး စိုးရိမျကွောငျ့ကွ ဖွဈစတေဲ့ ဟျောမုနျး level ကိုလညျး ထိနျးညှိပေး ပါတယျ။ အကြိုးကြေးဇူး ကတော့ ယောဂ ပွုလုပျပွီးရငျ ရတဲ့ စိတျအေးခမျြးတဲ့ ခံစားခကျြမြိုးကို ရရှိစေ တာပါ။
3. ပငျလယျတှရေဲ့ အသံက စိတျဖိစီးမှုကို နညျးစပေါတယျ။
ပငျလယျကနေ လာတဲ့ ဆူညံသံတှကေ စိတျဖိစီးမှု ဖွဈစတေဲ့ ကျောတီဇုနျးဟျောမုနျးကို နညျးစပွေီး စိတျကို တညျငွိမျသှားစေ တယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ။ ပငျလယျရရေဲ့ အသံက အမဗေို့ကျထဲမှာနတေုနျးက ကွားရတဲ့ အမရေဲ့ နှလုံးခုနျသံနဲ့ လညျး တူပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပငျလယျရဲ့ဆူညံသံကို ကွားရရငျ စိတျခရြသလို၊ စိတျလုံခွုံရ သလို ခံစားရတာပါ။
4. ပငျလယျရဲ့အသှငျက စိတျကို တညျငွိမျစတေယျ။
"ပငျလယျကို ကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါ၊ ကမျးခွတေဈလြှောကျ လမျးလြှောကျတဲ့ အခါ လုံခွုံ စိတျခရြတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ရောကျသှားသလိုပါပဲ" လို့ အာရုံကွောပညာရှငျ Michael Merzenich က ပွောပါတယျ။ တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျတှရေဲ့လကျထဲကနေ လှတျမွောကျလာသလို၊ အန်တရာယျတှေ ပွညျ့နတေဲ့မွို့ကနေ လှတျမွောကျလာ သလို ခံစားခကျြကို ပငျလယျရောကျတဲ့ အခါ ခံစားရ ပါတယျ။ မိုးကုတျစကျဝိုငျးရဲ့ အောကျမှာ ငွိမျသကျနတေဲ့ ပငျလယျရပွေငျက စိတျကို တညျငွိမျစေ ပါတယျ။
5. နသောတဲ့နမှေ့ာ ပငျလယျကို သှားရငျ ပြျောရှငျမှူကို မွငျ့တငျပေးတဲ့ စှမျးအငျတှေ ရရှိမှာပါ။
ကမျးခွမှော နပေူဆာလှုံတဲ့အခါ ရလာတဲ့ အနှေးဓာတျက ပြျောရှငျစတေဲ့ ဟျောမုနျးကို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။ အဲဒီ ခံစားခကျြက ခြောကလကျ ကွိုကျသူဟာ ခြောကလကျကို စားနရေတဲ့ အခါ ပြျောနတေဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ တူပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကမျးခွမှော နပေူစာ လှုံရငျ sunscreen လိမျးပွီး ရဓောတျပွညျ့အောငျနဖေို့တော့ မမသေ့ငျ့ ပါဘူးနျော။
ပင်လယ်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့ဩစရာ အကျိုးကျေးဇူး (၅) ခု
အလုပ်တွေ ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ " ကမ်းခြေ တစ်ခုခုကို သွားချင်လိုက်တာလို့" သင်ကိုယ်တိုင် ပြောမိကောင်းပြောမိ ပါလိမ့်မယ်။ သူများတွေ ပြောတာလည်း ကြားဖူး ပါလိမ့်မယ်။ ပင်လယ်ကို ကြည့်ခြင်းက စိတ်အပန်းပြေစေရုံ သာမက ခန္ဓာကိုယ် ကိုလည်း ပင်ပန်း သက်သာစေ တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။
1. ပင်လယ်က လူတွေအတွက် သဘာဝဆေးနည်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။
ပင်လယ်က လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးပြုကြောင်း သိမြင်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပါပြီ။ 18 ရာစုမှာ William Buchan တို့လို ဆရာဝန်တွေက ပင်လယ်မှာ ရေချိုးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ပင်လယ်ရေက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ အထူးရေတပ် ဆေးရုံတွေ မှာလည်း ပင်လယ်ရေကုထုံးကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပင်လယ်ရေက လူသားတွေအတွက် အကျိုးပြုကြောင်း ယခုခေတ်မှာလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိလာ ကြပါပြီ။
2. ပင်လယ်က ခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်ဆီဂျင် ဖြည့်ပေးပြီး စိတ်ပင်ပန်းမှုကို လျော့စေပါတယ်။
ပင်လယ်ရေသံက ဦးနှောက်အရှေ့ပိုင်းကို လန်းဆန်းစေ ပါတယ်။ ပင်လယ်ကို ရောက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ အမဓာတ် အိုင်ယွန်တွေကို ပင်လယ်လှိုင်းတွေက စုပ်ယူသွားတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီလို စုပ်ယူသွားခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်ဆီဂျင် များများ ရစေပြီး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်း level ကိုလည်း ထိန်းညှိပေး ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူး ကတော့ ယောဂ ပြုလုပ်ပြီးရင် ရတဲ့ စိတ်အေးချမ်းတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ရရှိစေ တာပါ။
3. ပင်လယ်တွေရဲ့ အသံက စိတ်ဖိစီးမှုကို နည်းစေပါတယ်။
ပင်လယ်ကနေ လာတဲ့ ဆူညံသံတွေက စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေတဲ့ ကော်တီဇုန်းဟော်မုန်းကို နည်းစေပြီး စိတ်ကို တည်ငြိမ်သွားစေ တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ပင်လယ်ရေရဲ့ အသံက အမေ့ဗိုက်ထဲမှာနေတုန်းက ကြားရတဲ့ အမေ့ရဲ့ နှလုံးခုန်သံနဲ့ လည်း တူပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပင်လယ်ရဲ့ဆူညံသံကို ကြားရရင် စိတ်ချရသလို၊ စိတ်လုံခြုံရ သလို ခံစားရတာပါ။
4. ပင်လယ်ရဲ့အသွင်က စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေတယ်။
"ပင်လယ်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ၊ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါ လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ" လို့ အာရုံကြောပညာရှင် Michael Merzenich က ပြောပါတယ်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့လက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်လာသလို၊ အန္တရာယ်တွေ ပြည့်နေတဲ့မြို့ကနေ လွတ်မြောက်လာ သလို ခံစားချက်ကို ပင်လယ်ရောက်တဲ့ အခါ ခံစားရ ပါတယ်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ငြိမ်သက်နေတဲ့ ပင်လယ်ရေပြင်က စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေ ပါတယ်။
5. နေသာတဲ့နေ့မှာ ပင်လယ်ကို သွားရင် ပျော်ရွှင်မှူကို မြင့်တင်ပေးတဲ့ စွမ်းအင်တွေ ရရှိမှာပါ။
ကမ်းခြေမှာ နေပူဆာလှုံတဲ့အခါ ရလာတဲ့ အနွေးဓာတ်က ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ ခံစားချက်က ချောကလက် ကြိုက်သူဟာ ချောကလက်ကို စားနေရတဲ့ အခါ ပျော်နေတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ်းခြေမှာ နေပူစာ လှုံရင် sunscreen လိမ်းပြီး ရေဓာတ်ပြည့်အောင်နေဖို့တော့ မမေ့သင့် ပါဘူးနော်။